Afmiishaar | Vol: 01 – Cad: 67aad – Indheergarad
HomeSheeko-faneedAfmiishaar | Vol: 01 – Cad: 67aad
November 12, 2020 Cabdifataax Barawaani Sheeko-faneed 0
Indheergarad – Noofenbar 12, 2020 – Hakis – Vol: 01 – Cadadka: 67aad
Aadan weligii wax ma baran, si hagaagsan wax u ma akhriyo waxna u ma qoro. Balse wuxuu aabbihii oo xerow ahaa ka bowsaday waxoogaa Af-Carbeed jajaban oo uu Quraanka ku kiciyo. Dugsigii quraanka waa uu ka saaqiday isaga oo yar. Yaraan baa uu ku bilaabay waxbarasho nacaybka. Mararka qaar xerowga dugsiga macallinka ka ihi waa uu garaaci jirey. Waa uu habsan badnaa, misena quraankuna uu ku adkaa. Waalidkii cilladdiisa waa saari waayeen, macallinkiisuna ul iyo waanaba ku kari waa. Madax adakaa! Odaygii dhaley oo xerow ahaa, waa Guuleed Guhaad e wuxuu ku macneeyay arrinkiisa in ay tahay cuqubo iyo nabsi laga jarayo tolkiis, oo waayo hore reero kale wax kala gaadheen. Islaantii dihatay ee Cambaro Yoonis iyaduna waxa ay u maleysay in il, fal ama sixir haleeleen wiilkeeda. Dhawr wadaad oo xerta maqaamka Sheekh Aw Buraale ah baa ay u fadhiisisay, kuna tidhi ku tufa hadalka Eebbe oo shayaadiinta iiga erya wiilka.
Wadaaddadii wax ka tari wayday tuftoodii. Wax haya iyo wax helay kolkii la fahmi waayay baa tuuladii laga soo kaxeeyay, lana keenay magaalo. Habaryartii Xaawa Yoonis baa lagu soo hagaajiyay, lana yidhi wiilkaas adigaa lagugu ogyahay. Xaawi judhiiba waxa ay ku dartay dugsi aan lagu baran diin, se lagu barto aqoonta kale. Fasalkii koowaad baa loo bilaabay, wuxuu in muddo ah la kacaaakufaba. Fasalkii labaad ayaa uu ku dhacay, oo kii saddexaad waa uu ka gudbi kari waayay. Isla fasalkii labaad baa lagu yidhi waa aad ku jiraysaa ilaa inta aad ka gudbayso imtixaanka. Sannadkii kaa ku xigay baa uu si la mid ah sidii hore imtixaankii ku dhacay. Habaryartii Xaawa oo labada jeerba og baa dhegaha canaan ku googaysay. Ma ku ay waano wax ka taraysaa, xerow iyo xigaalba waano ku kari waa e.
Aadan, wuxuu habeen madow ka baxsaday gurigii habaryartii Xaawa. Wuu baxsaday, oo guriga xaggiisa danbe ayaa uu ka dhacay. Xilli saq dhexe ah, wax dhar ah ma uusan qaadan, inta uu xidhan yahay mooyi e. Wuxuu ku tashtay in dugsigan iyo waxbarashadan, madaxiisa lagu wareeriyay uu ka baxsado. Suuqa ayaa uu xuley. Kirishboy ayaa uu ka noqday baabuur ka mid ah baabuurta xaafaddii habaryartii ma ahane, kuwa xaafadaha kale u baxa. Waxoogaa kolkii uu dhex booday dhallintii da’diisa ahayd ee ka shaqeynaysay baabuurta dadweynaha, wax quud maalinle ahna ka helo. Intaas meel kale ma geeyee, sigaar ayaa uu ku iibsadaa, waxna waa ka cunaa saddexda waqti. Maalmaha qaarna jilibka ayaa uu laabtaa, oo waa uu qayilaa. Qayilaaddu kuma cusba oo kolkii uu tuulada joogayba, maqaaxiyaha tuulada ku yaal garaabada ka soo hadha ayaa uu gawsaha taabsiin jirey. Magaaladiina qaadkii oo daray ah baa uu ka helayba, oo sigaarkii iyo fadhigiisiiba wata. Aadan wuxuu galey nolol kale oo gebi ahaanba illowsiisay waayihiisii hore, se marar badan xusuusaheeda ayaa xanuun ku ah. (…)
Halkan kala deg jaadka dhammeystiran PDF: Download